Ka codso gargaar deg-deg ah xafiiska degmadaada ama adeegyada aadanaha ee qabiilkaaga
Si aad u ogaato barnaamijyada guriyeynta ee aad adigu heli karto, booqo websaydhka Dheefaha Guriyeynta 101. Barta HB101.org, waxaad awooddaa inaad:
Barato wax badan oo ku saabsan xulashadaada guriyeynta
Barato wax badan oo ku saabsan adeegyada iyo barnaamijyada kaa caawinaya gurigaaga
Samayso qorshe aad ku gaarto hadafyadaada
Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan sida loo sii haysto hoygaaga hadda? Booqo bogga "Haysashada Guriyeyntaada".
Caawinaada COVID-19 darteed
Miyuu COVID-19 kugu adkeeyay inaad kiradaada bixisid? RentHelpMN waxaa loo aasaasay in lagu caawiyo dagayaasha Minnesota oo dib uga dhacay kiradooda ama ka cabsanaya in midaas dhici karto. Haddii aad la kulantay dhibaato sabab la xiriirto cudurka safmarka oo aad u baahantahay caawin aad ku bixisid kiradaada ama biilashada qarashaadka, waad u qalmi kartaa Caawinta Kirada Xaaladaha degdega ah ee COVID-19.
Meelo badan oo caawimaad laga helo
Khadka tooska ah ee HOPE ee mulkiilayaasha guryaha waa khad taleefan ee qaran oo leh la-taliyeyaal la heli karo 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Lambarka taleefonkeedu waa 1-888-995-HOPE (4673).
Minnesota Homeownership Center (Xarunta Guri-lahaanshaha ee Minnesota) ayaa kaa caawin doonta inaad hesho la-taliye guri la-wareegis ah.
Waaxda Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Mareykanka (HUD) waxay haysaa liistada wakaalado bixiya la-talin guriyeyn ah iyo hage looga hortagayo la wareegidda.
Barnaamijka Ka Hortagga Guri La'aanta iyo Caawinta Qoyska ayaa caawin kara dadka guri la'aanta ah ama noqon kara.
Kaalmada Gargaarka Dheeraadka ah ee Minnesota (MSA) ee kaalmada guriyeynta waxay caawisaa dadka naafada ah ee ku bixiya in ka badan 40 boqolkiiba dakhligooda xagga qarashka guryaha si ay u doortaan meesha ay ku noolaanayaan.
Barnaamijyada kaalmada guriyaynta waa qaar ka mid ah kaliya barnaamijyada adiga iyo qoyskaaga aad u qalmi kartaan inaad heshaan. Kuwa kale ayaa ka mid noqon kara daryeel caafimaad, daryeel carruur, kaalmo dakhli iyo taageero cunno.